တရုတ်အဆုတ်နာ ရောဂါသစ် မကူးစက်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်နေထိုင်ကျမလဲ ? – YANGON STYLE
တရုတ်အဆုတ်နာ ရောဂါသစ် မကူးစက်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်နေထိုင်ကျမလဲ ?
တရုတ်ပြည် ဝူဟန်မြို့မှ ဆုတ်ရောင်းဗိုင်းရပ်စ် တရှိန်ထိုး ကူးစက်မှုဟာ တချို့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကိုပျံနှံ့လို လာခဲ့ပါပြီ။ ဖစ်ပွားမှုမြန်ဆန်ပြီး၊ ရောဂါပြင်းထန်လို့ မိဘများအားလုံးဟာ ကိုယ့်မိသားစုရှိ ကလေးများ၊ သက်ကြီးရွယ်အို များကိုအထူး ဂရုပြုစေလိုအပ်ပါတယ်။
အဖျားအတက်မြန်ပြီး၊ ပြန်ကျရန် ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။
အဖျားကျသွားလည်း ခနလေးနေရင် ပြန်ဖျားလာအုံးမယ်၊
ဖျားပြီးနောက် ချောင်းဆိုးလာမယ်၊ ဖြစ်ချိန်ကြာမယ်၊
ပြင်းထန်စွာခံစားရပြီး၊ တော်ရုံနဲ့မပျောက်၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ ခေါင်းကိုက်ခြင်း နဲ့အတူ
ကိုယ်၊ လက်ကိုက်ခြင်းကို ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Mask အမြဲတပ်ပါ၊ လည်ချောင်းမခြောက်နေပါ‌စေနဲ့၊
တစ်ခါသောက်ရင် ရေကျက်‌အေး 50-80 CC သောက်ပါ၊ ကလေးဆို 30-50 CC သောက်သင့်ပါတယ်။
အနားမှာ သောက်ရန်အမြဲ အဆင်သင့်ဆောင်ထားပါ။
လူစည်ကားရာ သွားလာခြင်းကိုရှောင်ပါ။ လိုအပ်လို့ အပြင်ထွက်ရ ရထား၊ ဘတ်စ်ကားစီးရင် Mask အမြဲတပ်ဖို့မနေ့ပါနှင့်။ ဆီကြော် စားခြင်းများကို တတ်နိုင်သမျှရှာင်ထားပါ။
ယခုဆို အဆုတ်ရောင်းဗိုင်းရပ်စ် တရှိန်ထိုး ကူးစက်မှုကြောင့် တရုတ်ပြည်က ဝူဟန်မြို့ကြီးကို အဝင်အထွက်ပိတ်ဆို့လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးက တရုတ်လူမျိုးတွေ နှစ်ကူးဖို့ ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ တရှိန်ထိုး ကူးစက်မှုမြန်နေတဲ့ ဝူဟန်ဗိုင်းရက်လို့ခေါ်တဲ့ Corona virus ကို တားဆီးဖို့ WHO နဲ့တိုင်ပင်အပြီးမှာ တရုတ်အာဏာပိုင်တွေက ဓ ဝူဟန်မြို့ကို သီးခြားပိတ်ဆို့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ယနေ့ ချလိုက်ပါတယ်။
ဝူဟန်ကနေ သွားတဲ့ လေကြောင်းလိုင်း ရထားလိုင်း သင်္ဘောတွေကို အကုန်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး မြို့ထဲမှာတော့ ဆေးပစ္စည်းတွေ ပြတ်လပ်မှုကို စိုးရိမ်တာမို့ လူတစ်ယောက်ကို အချိုးကျသာ ရောင်းချပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးလို ပွဲတော်ကြီးတွေ၊ လူစုဝေးနိုင်တဲ့ ပွဲတော်တွေ အကုန်ဖျက် သိမ်းလိုက်ပြီး ဆရာဝန်တွေနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာ ဒီရောဂါကြီးကိ်ု တိုက်ဖျက်ဖို့ တကိုယ်လုံးလုံခြုံစွာဖုံးအုပ်ထားတဲ့ ဝတ်စုံတွေကို ဝတ်ဆင်ပီး ကုသနေကြပါတယ်။ နှစ်ကူးနဲ့အတူ ဒီရောဂါကပ်ဆိုးကြီး ပျောက်ကင်းဖို့အားလုံးက မျှော်လင့်နေကြပါတယ် ။